Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda sare Soomaaliya: Sharci ma ahan xil ka qaadisteyda | SAHAN ONLINE
Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda sare Soomaaliya: Sharci ma ahan xil ka qaadisteyda
MUQDISHO – Guddoomiyihii Maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan ayaa si weyn uga soo hotjeestay xil ka qaadistii uu shalay ku sameeyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.wuxuuna cadeeyey inaan loo marin hab sharciga waafaqsan.
Ibraahim Iidle Suleymaan oo wareysi siiyay Laanta afka-Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in sheegay in Dastuurka uu caddeynayo inay kala mafax banaan yihiib Hay’adaha Fulinta,Garsoorka iyo Xeer sharci-dejinta lana raacayo xeerka nidaamka Garsoorka qodobkiisa 23aad oo sheegaya sida shaqada uga fariisan karaan Guddoomiyaha Maxkamadda sare iyo xubnaha ugu sareeya oo ah da’da shaqada 65 sano.
Guddoomiye Iidle ayaa sheegay in uu sii wadanayo howlihiisii iyo waakibaadkiisa Qaran isla markaana Garsoorka aanu aheyn xil siyaasadeed,aidaas darteedna wixii sharci ah uu aqbalayo jase ahaatee wixii aan sharci aheyn uusan aqbali doonin.
Mar la weydiiyay sida ay ku kala duwan yihiin xil ka qaadistiisa iyo xil ka qaadistii uu Madaxweynihii hore Xasan Sheekh uu xilka ka qaaday Guddoomiyihii hore Maxkamadda sare Ceydiid Cilka Xanaf ayuu ku jawaabay in Guddoomiyihii hore xilka laga fariisiyay da’diisa oo uu xusay inuu dhaafay 65 sano.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu xafiiskiisa kasoo baxay waxa uu xilka kaga qaaday Guddoomiyaha Maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan ,isagoona magacaabay Baashe Yuusuf Axmed oo ah nin dhalinyaro ah.